Isixazululo se-HiSea Signal Jamming Solution ye-VIP eHhovisi likaNdunankulu waseJordani. Ngonyaka ka-2011, sibonga umzamo wamakhasimende ethu, ngesisombululo sethu sobungcweti, bawine ngempumelelo ibhidi: Isiginali yeselula Isistimu yeJamming yokwakhiwa kwezitezi eziyisi-6 ezibonisa ingilazi ye-curtainwall, wh ...
I-HiSea High powe Jammer Solution ePanama La Jolieta ejele Ngonyaka ka-2013, i-HiSea inelungelo lokuba umhlinzeki wezixazululo zejele lasePanama La Jolieta. Iphrofayili yesisombululo: Kufakwe ngamasethi ama-3 amabhendi agcwele i-jammer yamandla amakhulu, wonke ama-jammer ahlanganisiwe (ane-Gap).
Isixazululo seHiSea Signal Jammer esiya eKenya Vehicle Yezempi Ngonyaka ka-2012, sibambisene namakhasimende ethu, siphumelela ngempumelelo njengomhlinzeki womphefumulo weKenya Military. Enye yephrojekthi ebambisanayo, emotweni / emotweni kufakwe isiginali yesiginali edinga ubufakazi bokuqhuma Iphrofayili yesisombululo: Kufakwe ngamasethi ama-2 ...